Gini bu ogwu ogwu kacha sie ike? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ngwa nri dị mma maka mbufụt - akwukwo zuru ezu
Ngwa nri dị mma maka mbufụt - akwukwo zuru ezu
Gini bu ogwu ogwu kacha sie ike?
Turmeric (Curcuma longa) bụ ngwa nri na-ewu ewu na nri ndị India nke ndị mmadụ jirila kemgbe oge ochie. Ihe karịrị 300 nọ n'ọrụ na-arụ ọrụ. Isi ihe bu antioxidant a na-akpọ curcumin, nke nwere ikemgbochi-mkpaliNjirimara (13).Jenụwarị 25. 2021 g.
O nwere ike ịbụ na ị chọpụtala ugbu a na ọtụtụ n'ime usoro nri m bụ anụ ọkụkụ na ihu ọma, ihe ndị dị mma, ma e wezụga desserts m, na nke ahụ bụ n'ihi na mgbe nyochachara akpaaka anọ, amụtara m otu esi edozi ahụ m na mfe, mgbochi nri na-afụ ụfụ. Ya mere, gịnị kpọmkwem? Ndi Nri Anwulamu Oria? Ha bụ naanị ndị a mụụrụ nke ọma iji belata mbufụt ke ahụ. Ha bụ ihe ndị ọkachamara na ndị dọkịta kwenyere na anyị kwesịrị ị nweta karịa n'ihi na ọ bụghị naanị na ha na-ebelata mbufụt, mana ha nwekwara mmetụta mgbochi mkpali, yana ọtụtụ uru ahụike ndị ọzọ.
Na edemede nke taa, a ga m ekekọrịta nri asatọ na-egbochi mkpali nke m na-eri kwa izu ma nye gị ụfọdụ echiche ntụzi dị iche iche, mana cheta na ị nwere ike ịchọta usoro zuru ezu iji bipụta na weebụsaịtị m. Ọ dị mma, ka anyị banye n'ime. Berry, ihe ọ bụla Blueberries, strawberries, raspberries, ma ọ bụ blakberị niile nwere antioxidants a maara dị ka anthocyanins, ọ bụkwa anthocyanins na-enye mkpụrụ osisi na-acha anụnụ anụnụ na-acha ọbara ọbara.
Ọ bụ ezie na mkpụrụ osisi niile na-adịkarị elu na antioxidants, tomato bụ n'ezie nnukwu ụlọ ọrụ n'ihi na ha nwere ọtụtụ kemịkal dị iche iche dị mma maka ịlụ ọgụ mbufụt, kansa, na ọrịa obi. Ugbu a, akụkụ dị jụụ nke mbenata mbufụt dị, mana ha na-enyere anyị aka ịzaghachi nke ọma n'oge ọhụụ nke mbufụt, yabụ iri ha mgbe niile bụ echiche amamihe. Otu ụzọ nri kachasị amasị m na mkpụrụ osisi bụ briberị mịlị, mkpụrụ m Mkpụrụ akwụkwọ nri, mkpụrụ vaịn m, mkpụrụ m strawberry na banana smoothie na efere acai m.
Eji m n’aka na ị maara akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị mma maka gị, mana ị maara ihe kpatara ha jiri baara gị uru? Akwụkwọ nri, kale, chard Switzerland, dandelion greens, na elu ndị ọzọ abụghị nanị jupụtara na antioxidants, ha na-agbanyekwa ahụ. Ha juputara na nri dika akwukwo, fiber, vitamin, A, C, E na K, na otutu mineral nsas rabbit foods, tinyere nke nna m, enwere ihe kpatara umu anumanu na ala anumanu ji acho akwukwo ahihia. a na-edozi ahụ anyị na ọkwa cellular. Akwukwo akwukwo akwukwo na-egbochi mmuta ihe omuma, ha na-eme ka microbiome anyi di n 'elu, ma ha na-ebelata ahu oku nile.
Ntụziaka kachasị amasị m na akwụkwọ nri akwụkwọ nri gụnyere osikapa ọhịa m na salad rọket, oporo m, asparagus na salad ube bekee, chad chad m ​​na galik, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ m Post-workout smoothie na ibe m. Salmọn na azụ ndị ọzọ mara abụba dị ka azụ, sardines, anchovies, na makarel dịcha n’ihe omega-3 dị mkpa, ihe ndị a dịkwa mkpa n’ihi na ahụ gị enweghị ike ịme ha n’onwe ya. Ga-enweta ha site na nri gị.
Ọ bụrụ na ị nwere ọrịa autoimmune, omega-3s dịkwa mkpa karịa n'ihi na ọmụmụ egosila na enwere ike iji ha n'ọtụtụ ọrịa autoimmune dịka lupus, ọrịa ogbu na nkwonkwo, pịnye ọrịa shuga 1, psoriasis, ụdị colitis niile, otutu sclerosis , na ọtụtụ ndị ọzọ bara ezigbo uru. Om omega-3s dịkwa oke mkpa na ahụike ụbụrụ, na-akpali mmasị, ndị na-eri mmanu mmanu na mgbe niile anaghị enwe nkụda mmụọ ma ọ bụ nchegbu. Na nkenke, omega-3 fatty acids bụ otu n'ime nri ndị a mụtara nke ọma na ọmụmụ ihe na-egosi oke mmetụta mgbochi mkpali ha nwere n'ahụ.
Fọdụ n’ime usoro nri salmọn m kacha amasị m bụ mịko m ji sie Dijon, salmọn m na-egbu mara mmanụ, salmọn m salmon, m frittata nwere anwụrụ anwụrụ ọkụ, yana salmọn na salad ube oyibo. Mgbe ọtụtụ ndị na-eche banyere ube bekee, ha na-eche abụba ndị siri ike, abụba, nke ahụ dịkwa mma n'ihi na ube bekee juputara na abụba ndị nwere monounsaturated, nke bụ abụba dị mma nke na-enyere aka belata cholesterol ma belata mbufụt nke nkwonkwo. Abụba ahụike dị ka nke ube oyibo dị mkpa maka ike, mkpụkọ ọbara, mmepe ụbụrụ, ịmịkọrọ vitamin ndị nwere ike ịmịnwụ abụba, yana belata mbufụt. m na-amụ nyocha mgbe niile n'ihi na papa m nwere ọrịa Parkinson.
Na na na, fun fun banyere avocados na ha nwere n'ezie potassium karịa unere. Maka iberibe unere atọ na ọkara ka ị nyere unere, ị ga-enweta 10% nke ego a na-atụ aro kwa ụbọchị nke potassium, yana otu ụdị ube bekee, ị ga-enweta 14%. Fọdụ n’ime usoro nri ube oyibo m kacha amasị m bụ ube tuna m, ube bekee m, ube bekee, nri karọt m na zucchini pasta na ube bekee kukumba, na akwa m na ube bekee.
Broccoli na akwụkwọ nri ndị ọzọ dị ka kọlịflawa, pak choi na Brussels na-epulite jupụtara na antioxidants, vitamin na phytochemicals. Broccoli dị na vitamin K, vitamin C, potassium, magnesium, na faiba, mana ọ bụ sulforaphane na-eme broccoli ọpụrụiche, ogige ndị amụrụ n'ọtụtụ ebe na broccoli na ọmụmụ ihe gosiri na o nwere ọrịa kansa na mmetụta na-emerụ Somefọdụ n'ime m broccoli kachasị amasị m na akwụkwọ nri cruciferous gụnyere salad broccoli m, broccoli m na-eri mmiri, m dum 30 broccoli casserole, m garlic na ginger bok choi, na m kọlịflawa osikapa tabbouleh. E jirila galik mee ọtụtụ narị afọ maka ọgwụ ya, ọtụtụ nyocha egosila ugboro ugboro na ọ nwere ọrịa kansa na-egbochi mmetụta na-enweghị ike.
N’ezie, galik na-enye onyinye dị ukwuu n’ihe ọ bụla a na-eme, ma e nwere uru ndị ga-eme ka galik na-enwu n’ezie. Garlic nwere ọgwụ ndị na-egbochi mkpali dị ka quercetin, nke na-egbochi ihe mgbochi histamine na sọlfọ na-akpali usoro mgbochi gị iji lụso ọrịa ọgụ. Ọ bụrụ na ị na-arịa ogbu na nkwonkwo, galik nwekwara ike bụrụ ezigbo enyi gị dịka egosiri galik iji belata mbufụt, mgbu, na cartilage mmebi metụtara ogbu na nkwonkwo.
ibu ukwe ukwe review
Ugbu a ọ na-esiri ike ịhọrọ naanị mkpịsị aka nke usoro nri galik n'ihi na m na-eji galik n'ọtụtụ usoro nri dị na weebụsaịtị m, mana ahụrụ m zucchini noodles na lemon garlic s prawns, kọlịflawa m puree na galik na herbs, m sautéed na garlic Switzerland chard , m ụtọ nduku fries na garlic aioli na m poached ọkụkọ na oyi na akwukwo nri ofe. Ya mere, dị ka galik, a na-eji ginger eme ihe gburugburu ụwa ọtụtụ narị afọ maka ọgwụgwọ ya. A maara ya iji nyere aka belata ọrịa ngagharị, belata ihe mgbu, ma belata ọgbụgbọ.
Jinja nwere ihe ndị a maara dịka gingerols, nke na-ebelata mbufụt ma gbanyụọ ogige na-akpata mgbu na ahụ. N'ihe mgbaze, ginger na-enyere mgbaze aka ma na-enyere aka na mmegharị, nke pụtara na ọ na-eme ihe ngwa ngwa site na eriri afọ anyị, na n'eziokwu, ginger egosiputala na ihe abuo abuo nwere ike ibughari ngwa ngwa nke bu ihe di nkpa mgbe ichoro ntachi obi. N'ihi uru ndị a na-agbari nri, egosila na ginger na-enyere aka belata kansa cancer na ịkwalite usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ugbu a cheta na ihe dịka 75 ka 80% nke sistemu anyị ji arụ ọrụ sitere na eriri afọ anyị, yabụ ihe ọ bụla nke na-enyere eriri afọ aka dị ka ginger, ọ 'Aga m akwado usoro ahụ ji alụso anyị ọgụ.
Fọdụ n'ime usoro ginger kachasị amasị m bụ skallops m na citrus na ginger sauce, m karọt na ofe ginger, mmiri ara ehi m, kukumba m na melon gazpacho na ginger shrimp, na osikapa kọlịflawa Asia na ginger shrimp nwere mkpụrụ chia na mgbe mkpụrụ osisi Chia bụ nke amara taa dika nri-nri, n’oge ochie ha bu nri di nma nke amara nke oma n’inye ike, na n’asusu Mayan oge ochie a na-asugharia okwu chia dika stachi, n’agbakwunye na vitamin na nri nile ndia. hefty dose nke eriri. N'ezie, ọ bụ otu n'ime isi mmalite kacha mma n'ụwa, eriri ahụ niile dịkwa mma maka ịme ka shuga dị n'ọbara dị na, n'ezie, na-akwado ezigbo ahụike eriri afọ. A na-ejikọ mkpụrụ osisi Chia na flaxse na antioxidants na omega-3 ájá, na antioxidants na-alụ ọgụ ndị na-enweghị ihe ọ bụla nakwa omega-3s na-ebelata mbufụt, dịka m kwuru na salmon.
Fọdụ n'ime usoro mkpụrụ osisi chia kachasị amasị m gụnyere pudding chia m, chia mkpụrụ jam, mkpụrụ vaịn m kachasị mma, ahụekere m na jelii chia pudding, na aki oyibo chia mango popsicle. Ugbu a enwere ọtụtụ nri na-egbochi mkpali n'ebe ahụ karịa asatọ asatọ m kpọtụrụ aha taa.Ọ nwere ike ịbụ na achọpụtara m na usoro nri niile m na-agwakọta ma kwekọọ na ihe ndị a niile iji mepụta nri ọhụrụ, mana ọ bụ quirks ha niile gbasara ozi ahụ, echekwara m n’isiokwu a taa bụ ajụjụ izugbe, ịgbanwe usoro iri nri gị nwere ike ịgbanwe ahụike gị niile? ? Azịza ya, ị nwere ike nzọ na ya.
Oge agabeghị ịmalite ime ka ahụ dị mma ma meziwanye ọdịmma gị n'ozuzu mgbe nri ọkacha mmasị gị na-emetụta. Dị ka ihe ncheta, ị nwere ike ịchọta ọtụtụ usoro nri na weebụsaịtị m na m ga-arụ ọrụ na usoro ọhụụ n'izu a na m ga-ewetara gị izu na-abịa. Ya mere, anyị ga-ahụ gị ọzọ mgbe ahụ. (egwu na-ekpo ọkụ)
Kedu ụzọ kachasị ọsọ iji belata nsị na ahụ?
Soro ndụmọdụ isii ambenata mbufụtn'ime gịahụ:
Ibu elu na mgbochi-mkpalinri.
Belata ma ọ bụ kpochapụmkpalinri.
Wepụta oge iji na-emega ahụ́.
Kwụsị ibu ibu.
N'ime ọrụ nlekọta ahụike m dị ka onye geriatric, otu n'ime ihe mụ na ndị ọrụ ibe m na-ahụkarị na ndị agadi bụ ọnọdụ anyị na-akpọ adịghị ike, nke a bụ ọnọdụ nke ọtụtụ ndị hụworo na ndị ikwu ha meworo agadi ma ọ bụ ndị ọzọ nwere ọrịa ebe ndị mmadụ nọ nwere nsogbu na ike ha nwere ike ịda ike na ọrịa a anyị na-akpọ adịghị ike jikọtara na nsonaazụ dara ogbenye yana ọtụtụ nkwarụ arụmọrụ na nhụjuanya maka ndị ọrịa anyị site na ihe ndị anyị rapaara ugbu a n'ụdị mmachi ahụ. Anyị biri ndụ ma chọpụta na e nwere ebe pụrụ iche n'ụzọ ahụ anyị nwere ike iduzi ọgwụ ga-egbochi mkpụrụ ndụ ndị a ime ihe na-akpata adịghị ike. Ya mere, anyị rụrụ ọrụ ọtụtụ na sel ọdịbendị ịmalite iji ọgwụ ndị a anyị na-akpọ Drak inhibitors, anyị chọpụtara na ha rụpụtara nhapụ nke ihe ndị ahụ site na sel senescent, ma ọ dịkarịa ala na nri ọdịbendị nke na-eme ka adịghị ike na ndị a bụ mkpụrụ ndụ mmadụ na anyị ọzọ nwalere ma otu ọgwụ ahụ a ga-enye ụmụ oke iji belata ụdị nke ihe mkpụrụ ndụ senescent na-emepụta, anyị chọpụtara na ọ mere, na mgbe ahụ ọ mere anyị gara n'ihu wee lee oke oke oke oke, nke bụ Ejikọtara ndị 90 afọ, anyị mekwara ọtụtụ ihe na ụmụ oke a iji hụ ma ọ bụrụ na ha esighi ike, yabụ anyị hụrụ etu ha ga-esi gba ọsọ na igwe ịgba ọsọ ma ọ bụ ihe ike ha dị ka ọkwa ọrụ ha ma anyị chọpụtara na nke a Ihe omuma nke ime agadi ma anyi karia otutu uzo anyi deghachiri ma obu yie ihe ndi anyi huru dika ndi adighi ike, anyi nyere ndi umu ogwu ndia nwere oria a nke Ferralti na anyi choputara ezigbo oru ha. ọnwa ole na ole, ọ dị ka ọ ga-ekwe omume iji ọgwụ ndị a eme ihe, ọ bụghị naanị ọgwụ ndị ahụ na-emetụta ihe mkpụrụ ndụ senescent na-emepụta, kamakwa ọgwụ ndị anyị wepụtara n'oge na-adịbeghị anya ọbụna na-egbu mkpụrụ ndụ senescent na ụmụ oke iji rụọ ọrụ na ọgwụgwọ ahụ. nke adịghị ike na ọrịa metụtara ọrịa na-adịghị ala ala nke a na-akpọ nke na-akpata ọtụtụ nrịanrịa na nlekọta ahụ ike na ịnwụ na ndị anyị.
Anyị bụ akụkụ nke otu netwọk nke 18 isi agadi na United States na anyị ejikọtara ya na European Union, ndị na-arụkwa ọrụ na mpaghara a Dịka otu, anyị na-azụlite atụmatụ mba na mba iji mepụta ụzọ maka ọmụmụ ihe ọmụmụ na ọgwụ ndị na-eleba nká anya. Ebumnuche anyị abụghị ịnwa ịgbatịkwu afọ na-enweghị isi, yana ịghara ịnwa ịbawanye afọ ndụ ọ bụla na-agbatị ihe mgbaru ọsọ anyị bụ ịgbalị imeziwanye ahụike n'oge ndụ, nke ndị mmadụ na-eche na ha enweghị onwe ha oria ma nwekwa ike ime ihe ha choro ma ndi ozo adighi ka ha nwere ike mezuo nkwa ha iji mezuo ihe a
Gịnị ka m nwere ike ị toụ iji belata mbufụt?
Ndị a bụ nkwado iseụọ ihe ọ .ụ .ụnanwere ikenyere aka ịlụ ọgụmbufụtn'ime ahụ gị.
Mmiri soda + mmiri. Nnyocha e mere n'oge na-adịbeghị anya na Journal of Immunologyfoundna-a drinkingụ mmanyaotu mmiri mmiri soda na mmiri nwere ike inyere akabelata mbufụt.
Pasili + ginger green juice.
Lemọn + turmeric tonic.
Smoothie na-arụ ọrụ.
June 20. 2018 Nov.
N'afọ gara aga, emere m otu isiokwu gbasara nri ndị na-egbochi mkpali nke m na-eri kwa izu nke nwere ihe karịrị nde mmadụ abụọ na ọkara. M ga-asị na ọ mara ezigbo mma. Taa, echere m na m ga-eso isiokwu a isiokwu gbasara mgbochi ihe ọ inflammatoryụ inflammatoryụ na-atọ m ụtọ nke na-atọ m ụtọ ị andụ mmanya ma echere m na ị ga-emekwa.
ihe mct mmanu di nma
Ihe ọ drinksụ drinksụ ndị a na-enye nri dị iche iche, antioxidants, na ndị na-alụ ọgụ ọgụ iji nwee ike igbochi mbufụt ma nye sistemu mgbochi anyị ntakịrị nkwado. Echere m na anyị niile nwere ike iji nke ahụ, ọkachasị afọ a enwere m nhọrọ mmanya ọ todayụ todayụ taa, mana ị ga-ahụ ọtụtụ ihe ọ orangeụ orangeụ oroma na nke ahụ bụ n'ihi na turmeric bụ isi ihe na ọtụtụ n'ime ha, site na ndị na-ekpo ọkụ Site na teas na smoothies jụrụ. Ugbu a, tupu onye ọ bụla ekwupụta na echefuru m banyere mmiri ara ehi ọlaedo n'isiokwu nke taa, akwụsịrị m ịhapụ ya n'ihi na m meworị edemede dị iche iche banyere ya, echekwara m na m ga-enye gị ụfọdụ usoro nri ọhụụ taa, mana ọ bụchaghị kpochapụ ihe mgbochi ụọ ihe ọ .ụ .ụ.
Otu ihe ikpeazụ na nke a bụ ajụjụ m chọrọ ichetara gị na ị nwere ike ịchọta ụdị nsụgharị ike nke usoro nri ndị a niile na ndị ọzọ na weebụsaịtị m. Ya mere n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido. Ihe ọ drinkụ firstụ mbụ anyị ga - eme bụ tea tea a dị omimi na nke gbara ọchịchịrị.
Probably nwere ike ịnụla mbụ banyere elderberry n'ihi na ọ bụ mkpụrụ osisi na-enweghị ume nke a na-eji n'ọtụtụ ọgwụgwọ oyi na ọgwụ na-agwọ ọrịa dịka lozenges na syrups. Mana taa, anyi ga-ezere shuga, agba na ihe ndi ozo site na iji ihe ntaneti di ato ma nweta uru ahu ike ahu site na isi ya - iko mmiri abuo n’ime ite nke nkpuru ahihia abuo. Na ị ga-achọpụta na tomato ozugbo nye ha ink agba.
Mgbe ahụ tinye osisi nke cinnamon, nke ọ bụghị naanị na-enye ya ọmarịcha ụtọ kama ọ bụkwa mgbochi mkpali. Ekem weta ihendori ahụ na obụpde. Belata ọkụ na ọkwa dị ala ma hapụ ya ka ọ gbanye 15 nkeji.
Ozugbo tii simụchara ọkụ, gbanyụọ ọkụ ma hapụ ya ka ọ nọrọ ọdụ ruo nkeji ise, ma wepụ ya. Ibu ibu na-atụ ihe buru ibu n'ihi na m na-agbapụ, mgbe ahụ, m na-awụpụ ya n'ime iko. Ihe ọ quickụ andụ a dị mfe ma dịkwa mfe ga-eme ka ị kpoo ọkụ n’ụbọchị oyi, mana ọ bụrụ na ụlọ gị dị ọkụ, zọọ tii a mgbe ị mechara ya, wukwasi ya n’elu ice maka nhọrọ tii na-enye ume ọhụrụ. (Egwú dị nro) Na-esote na ndepụta anyị bụ ihe ọ drinkụ Iụ m mụtara ime mgbe m nọrọ ọnwa abụọ na Indonesia na nke ahụ bụ Jamu.
O di nwute na Bali m na-eri nri na mberede ma nwee oria autoimmune dị egwu ma ihe ọ thisụ jụ jamu a na-a wasụ bụ n'ezie onye nzọpụta m. Ọ bụ ezie na e nwere ọdịiche dị na jamu, ihe ndị bụ isi na-abụkarị turmeric, n'ihi nke a ana m akwado ịzụrụ mgbọrọgwụ turmeric ọhụrụ ma ọ bụrụ na ị ga-enweta ya. Mgbọrọgwụ Turmeric yiri nha na ọdịdị na mgbọrọgwụ ginger, mana mgbe ị mebiri ya, ọ bụ agba mmanụ oroma na-enwu gbaa, ebe ginger bụ agba odo odo.
Ha abụọ na-eme ihe ọ drinkụ antiụ na-egbu egbu. Iji mee ya, ị ga-achọ ihe dị ka iko iko coarsely chopped turmeric na mkpịsị aka-sized mpempe nke ginger, anyị ga-nje na ala na njedebe. Nwere ike ịhapụ usoro ahụ na-agba ume ma ọ bụrụ na ịchọọ ịghara ịkọwa mkpịsị aka gị, na-enye turmeric gị na ginger ezigbo ọfụma.
M sway na mgbe ụfọdụ m bee ya mgbe ụfọdụ anaghị m tụọ ya iberibe ihe dị ka nkeji iri na ise inch oké ma ọ bụ ụda na mgbe ahụ tinye ya na gị blender. Iji mee nke a, fesaa obere oji. Oji ojii nwere ike inye aka mee ka absorption nke curcumin si na turmeric dịkwuo elu.
Wunye na iko anọ nke mmiri oyibo, nke nwere antioxidants na electrolytes, wee gwakọta na nnukwu ọsọ maka ihe dị ka nkeji ma ọ bụ ruo mgbe ọ ga-adị mma. (Egwú dị nro) Wunye nke a n'ime ite ma weta obụpde, wee belata Tụgharịa ọkụ ahụ ma gbanye nkeji iri abụọ. Gbanyụọ ọkụ ma gbakwunye ihe ọ juiceụ ofụ nke otu lemon na ngaji mmanụ a tablespoụ abụọ na nwuo.
Kpoo ngwakọta ahụ site na nhicha ntupu ma ọ bụ akpa mmiri ara ehi, mana mara na ọ ga-emerụ akpa mmiri ara ehi gị na uwe gị, tebụl, yana ihe ọ bụla ọzọ metụtara ya, yabụ kpachara anya. Ọzọkwa, m na-etinye ya n'ime nnukwu efere iji tụọ nnukwu mpe mpepe mpe mpe mpe akwa wee wụsa ya n'ime iko m tinyere n'ime friji. Jamu nwere ike ịnwe obi ụtọ ma ọ bụ kpoo ọkụ ma ọ ga-anọ na ngwa nju oyi ruo ihe dị ka otu izu, kpoo ya tupu ị gaa ozi.
Ọ na-amasịkarị m ịnụ ụtọ ihe dị ka ọkara otu iko n'otu oge. (Egwú dị nro) Maka ihe ọ drinkụ drinkụ na-esote, ọ bụ ụdị nke njikọta nke mbụ n'ihi na ọ bụ tii turmeric ma ọ dị mfe ịme. Naanị tinye iko mmiri abụọ n'ime ite mmiri na oge a anyị na-eji turmeric ala karịa turmeric ọhụrụ, naanị ịnye ụfọdụ nhọrọ.
Ya mere tinye ọkara teaspoon ala turmeric na otu ụzọ n'ụzọ anọ nke teaspoon nke ose ojii na tablespoons abụọ nke ihe ọ lemonụ lemonụ lemon, nke bụ ihe ruru ego ị nwere ike inweta site na otu lemon. Weta nke a n’ọkụ ma ozugbo ọ esi, belata ọkụ ma gbanye ya maka nkeji iri, gụchaa tii, gbanyụọ ọkụ, tinye ụfọdụ Ho ma ọ bụrụ na ịchọrọ, bido ma mee ka tii ahụ dị jụụ nkeji ma ọ bụ abụọ. Wunye tii site na sieve n'ime iko iji wepu oji oji ma gbalịa izere ịwụfu turmeric ma jide n'aka na ị ga-ehichapụ ya ozugbo.
Maka obere ekpomeekpo lemon, m na-etinye obere lemon wedges mgbe niile.M ga-ekwukwa na mgbe tii a dị ụtọ, ọ ka dị ọkụ, yabụ, m were obere obere wee jụọ maka usoro a na-esote maka afọ gara aga ma ndị a bụ ginger gbaa. Ngwunye ginger ndị a zụtara n'ụlọ ahịa ahụ dị oke ọnụ ma ha na-atọ ụtọ dị ka ọdịmma dị mma site na isi akara. Ugbu a, i nwere ike ime ha n'ụlọ.
Maka uzommeputa a, ị ga-achọ otu ụzọ n'ụzọ anọ nke mgbọrọgwụ ginger gbakwunye, na ọzọ, ị nwere ike ma ọ bụ ghara ịmịpụ ginger. Ga-achọkwa iko nke atọ nke ihe ọ lemonụ lemonụ lemon, nke bụ ihe dị ka lemọn atọ ma ọ bụ anọ dabere na nha gị. Ginger na ihe ọ alongụ lemonụ lemon na nkeji iri na ise n'ime Tinye mmiri oyibo na ncha ma ọ bụ fesaa ose cayenne na igwekota dị elu.
Mgbe ahụ tinye ihe mkpuchi ahụ, na-agwakọta ihe dị ka otu minit ma ọ bụ karịa, ma ọ bụ ruo mgbe ngwakọta ahụ dị mma. (Egwú dị nro) Ozugbo agwakọtara ya, gbanye mmiri ahụ n'azụ nchacha ihe na azụ nke ngaji iji wepụ ihe ọ juiceụ juiceụ dị ka o kwere mee. Wunye mmiri mmiri a na-etinye n’ime iko gbara shuga ma drinkụọ ya niile otu mgbe.
Ee ee, ndị a bụ ezigbo ụtọ ma na-atọ ụtọ dị ka ndị azụrụ n'ụlọ ahịa. (Egwú dị nro) Nke na-esote bụ painiapulu turmeric smoothie dị jụụ ma na-enye ume ọhụrụ, nke zuru oke mgbe ọ na-ekpo ọkụ n’èzí. Maka uzommeputa a m na-eme atụmatụ banyere tablespoon nke turmeric ọhụrụ na teaspoon nke ginger ọhụrụ.
Na maka ihe ọ becauseụ drinkụ a, n'ihi na anyị nwere ya Emela ka njedebe na njedebe, ị ga-achọ ịchapụ ma turmeric ma ginger. N'ime ihe na-enye gị nnukwu ọrụ, tinye otu iko mmiri ara ehi na-abụghị mmiri ara ehi, iko abụọ nke pineapple friji a na-etinye na enzymes na antioxidants, banana nke dị elu na potassium ma na-enyere aka mee ude a dị ụtọ, na grated turmeric c na ginger. Gwakọta nke a ruo mgbe ọ dị mma ma dị mma. (Egwú dị nro) Ọ bụrụ n'ịchọrọ ị drinkụ obere ihe ọ turụ turụ turmeric na flair na-atọ ụtọ nke na-eme ka obi dị gị mma, nke a bụ ihe ọ drinkụ drinkụ maka gị.
Maka Smoothie mgbochi mkpali nke na-enweghị turmeric mana ọ ka juputara na nri na antioxidants, emere m ụtọ a bluuberi smoothie. Tinye iko mmiri oyibo abụọ na blender gị na iko abụọ nke friji friji, otu banana unere oyi, ọkara iko yogọt ma ọ bụ kefir ma ị nwekwara ike iji mmiri ara ehi na-enweghị mmiri. Otu tablespoon nke flaxseed, nke dị elu na omega-3 fatty acids, ga-enyere aka mee ka smoothie dịkwuo elu.
Ekem tinye ihe mkpuchi ahụ, gwakọta ma ọ bụ bido ihe dị ka sekọnd 30 ruo mgbe ọ dị mma na ude mmiri na mma odo odo. (egwu dị nro) Wunye smoothie ahụ na iko, tinye ahịhịa ma ọ bụrụ na-amasị gị, na-a siụ ihe ọ drinkụ thisụ a na-atọ ụtọ ma dị ike. Know maara na m hụrụ n'anya akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ smoothies na m nwere ọtụtụ Ezi ntụziaka na m website ma tod ay, Achọrọ m igosi gị otú ị ga-esi mee akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ihe ọ juiceụ juiceụ na nke a bụ a copycat si onye m zụtara na mbụ si enwe Juicery.
Iji mee nke a, ị ga-achọ tablespoons abụọ nke ihe ọ lụ lụ wayo, nke a na-emekarị site na wayo, kukumba a na-egbutu ma anyị tinye ụfọdụ mmiri mmiri na mmiri ọ juiceụ greenụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ anyị, osisi atọ nke celery nke ị na-egbusi na apụl ị cored na bee n'ime iberibe na i nwere ike iji ihe ọ bụla dị iche iche apụl ị chọrọ. Wunye ihe ọimeụ lụ lime n’ime blender yana kukumba, apụl, obere mpempe akwụkwọ ginger ọhụrụ, celery, akwụkwọ atọ kale na ị nwere ike ị ga-agbaji epupụta ngwa ngwa na iko akwụkwọ nri. Ngwakọta gị ga-ejupụta ebe a yana n’ihi na anyị anaghị agbakwunye mmiri na nhazi a, ị ga-eji ihe na-eme ka ịpịkọta ihe ndị ahụ n’ime ahịhịa.
Na iji mee ka gị na igwe na-arụ ọrụ dị mfe, tinye ihe ndị nwere mmiri karịa na ya, dị ka kukumba na apụl, na blender maka otu nkeji ma ọ bụ nke ga-agbaze na ya dị ka nke ọ bụla green smoothie. (egwu dị nro) N'ezie, ịnwere ike ị drinkụ ya nke ukwuu ma nwee nnukwu eriri, mana amaara m na ụfọdụ ndị nwere nsogbu ịgbari eriri iji mee ihe ọ juiceụ aụ na-acha akwụkwọ ndụ na ya, wụsa ya n'ime akpa mmiri ara ehi nut wee weta ya n'elu efere, mgbe ahụ wunye n'iko. Nke a bụ ihe ọ juiceụ juiceụ na-acha akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ na-emetụ uto sitere na apụl.
Ma ọ bụrụ na ị chetụla otu esi eme ihe ọ greenụ greenụ na-acha akwụkwọ ndụ na-enweghị juicer, nke ọma, gaa maka ya. Ihe ọ drinkụ finalụ na-egbochi mgbochi mkpali na ndepụta anyị taa bụ apụl a, karọt na beet smoothie, ma ị nwere ike ịsị na ọ jupụtara na antioxidants site na agba ya na-acha ọbara ọbara, m na-ekwukarị na smoothie a bụ nke ị drinkingụ ihe oriri gị ma ọ malitere site na atọ karọt, nke ị kwachapụrụ, belata, ma bee n'ime anụ ọhịa nke abụọ. Also tinyekwara beetroot na-ajụ ase ma ọ dịịrị gị ma ị ga-ehichapụ karọt na beetroot.
M na-achọsi ike ịkọchasị ha abụọ wee fesie beetroot ahụ n'ime nnukwu iberibe. Maka uto okike, bee apụl, were ụdị ọ bụla ịchọrọ ma ihe ọ juiceụ juiceụ buru ibu oroma. Tinye ihe ọ orangeụ orangeụ oroma na igwe mmiri gị na-agba ọsọ ọsọ na iko mmiri, apụl na-egbu, karọt, beets na obere ginger ọhụrụ.
Gbakwunye mkpuchi ma jikọta elu maka ihe dị ka nkeji ruo mgbe akwụkwọ nri gbawara ma jiri ire ụtọ. (Egwú dị nro) smoothie a bara ụba na vitamin na nri, ọ dịkwa mma ma sie ike. Ma ugbua ị matara ụzọ esi eme mmiri si na smoothie, ị nwere ike ịgbanye nke ahụ mgbe niile ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Anyị niile nwere mmasị dị iche iche na ụdị udiri m na ebumnuche m bụ inye gị nhọrọ. (Egwú dị nro) Olileanya na ị masịrị usoro ntụziaka ndị a niile na ihe ncheta, imeru ihe oke na ọtụtụ dị iche iche. Nwee obi ụtọ igbanwe nri na ihe ọ drinksụ healthyụ dị iche iche dị mma ị na-enwe kwa izu.
Ọ bụrụ na isiokwu a na-amasị gị, mee ka m mara site n'inye mkpịsị aka gị ma kesaa ihe ọ drinksụ drinksụ na-egbu egbu kachasị amasị gị na nkwupụta. Ehe, nke ahụ bụ maka m n'izu a, a ga m ahụ gị ọzọ n'isiokwu na-esonụ (egwu dị nro)
Na ngwa nri na-akpata mbufụt?
O doro anya na ọnụ ọgụgụ ndị na-eri ihengwa nrina-adịkarị mfe ịmalite mmepe nke ọrịa na-adịghị ala ala. Ihe mejupụtara yangwa nrinwee ikike igbochimkpaliụzọ naduruala alambufụt, nke na-eme ka ihe ndị dị ndụ nke ndị angwa nri.Jenụwarị 25. 2018 Nov.
Ndi turmeric nwere ike inyere aka na mbufụt?
Na-adịbeghị anya ọmụmụ na-egositurmeric na-enyere akagbochie ma belata nkwonkwombufụt. Nke a na - ebelata ihe mgbu, nkwesi ike, nambufụtmetụtara ogbu na nkwonkwo. Maka mgbaze nri, lezienụ anya nke ọmaturmericna mgbakwunye. Akwa onunu ogwunwere ikemee ihe iwe iwe.Ọkt 24 2019
Kedu ihe mgbakwunye kachasị dị irè nke mgbochi mkpali?
Omega-3 fatty acids, nke juru na azụ mara abụba dị ka cod, so nanke kachasị ike-Mmeju ọkụ. Ndị aMmejunwere ike inye aka ịlụ ọgụ ọtụtụ ụdịmbufụt, gụnyere vaskụlambufụt.
Àkwá dị njọ maka mbufụt?
Vitamin D dị naakwana-agbanwemkpalinzaghachi na ọrịa ogbu na nkwonkwo. N'ihi ya,akwabụ otu n'ime ndị kasị mmamgbochi mkpalinri.23 june 2020bọchị 2020
Gịnị bụ nri iri kacha njọ maka mbufụt?
Ihe oririihe kpatara yambufụt
nụchara anụcha, dị ka achịcha ọcha na achịcha dị iche iche. Fries French na ndị ọzọ e ghere eghenri. soda na ihe ọ otherụ otherụ ndị ọzọ na-atọ ụtọ shuga. anụ uhie (burgers, steaks) na anụ esichara (nkịta dị ọkụ, soseji)
Gịnị bụ vitamin kacha mma maka mbufụt?
VitaminE. Juru na antioxidants,vitaminE na-eme ka usoro ahụ gị ji alụso ọrịa ọgụ nwekwara ike ịdị nfembufụt. Ọ bụrụ na ị nwere ọrịa ogbu na nkwonkwo, ị nwere ike ịchọpụta na ọ na - enyere aka ijikwa mgbu mgbe ejiri usoro ọgwụgwọ. Nwere ike inweta ya n'ụzọ dị mfe na nri ị na-eri.Ọgọst 20 2020
Ndi turmeric na-ebelata mbufụt n’ezie?
Na-adịbeghị anya ọmụmụ na-egositurmericna-enyere akagbochienabelatankwonkwombufụt. Nke ana-ebelatamgbu, isi ike, nambufụtmetụtara ogbu na nkwonkwo. Maka mgbaze nri, lezienụ anya nke ọmaturmericna mgbakwunye.Ọkt 24 2019
Kedu ka m ga-esi belata mbufụt na nkwonkwo m n'ụzọ nkịtị?
Mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri na ọka niile. Mkpụrụ osisi, veggies na ọka niile, dị ka akụkụ nke nri siri ike, na-alụ ọgụmbufụt ndammanama nwekwara ike inyere aka ịchịkwa ibu gị. Manọgide na-enwe a ike ibu na-ebelata nchegbu nankwonkwo. Abụba nke oke ahụ na-emepụta ma na-ewepụta kemịkal nke na-akwalitembufụtn'ime ahụ.Mar 27 2019
Enwere ahịhịa ma ọ bụ ngwa nri na-enyere aka na mbufụt?
Ihe ị na-eri, gụnyere ahịhịa na ngwa nri dị iche iche, nwere ike imetụta mbufụt n’ahụ gị. Isiokwu a na-enyocha sayensị dị n'azụ ahịhịa 9 na ngwa nri nke nwere ike inye aka ịlụ ọgụ. Okwesiri ighota na otutu omumu ihe banyere isiokwu a na ekwu okwu banyere ihe omimi nke anakpo ihe ngbagha.
Kedu ihe kachasị mma maka ọrịa ogbu na nkwonkwo?
1 Turmeric. 2 Oji Oji. 3 pawuda. 4 Galik. 5 Agba. 6 Cayenne. 7 Cloves.
Kedu ụdị ngwa nri dị mma maka ahụ gị?
Oji oji bu kwa ezigbo enyi na turmeric, nke bu oke nri nke aghaghi itinye ya na ose oji ka aru anyi wee nweta ihe ogwugwo nke turmeric. Can nwere ike ijikọta nke ọ bụla n'ime ahịhịa ndị a ma ị ga-enweta ezigbo uto.